ပျံ့လွင့်သွားသော ၅ထောင်တန် ၆ရွက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » History » ပျံ့လွင့်သွားသော ၅ထောင်တန် ၆ရွက်
ပျံ့လွင့်သွားသော ၅ထောင်တန် ၆ရွက်
Posted by kp on Jul 14, 2013 in History, Ideas & Plans | 11 comments
ဒါနဲ့ဘဲပြီးခဲ့တဲ့လက ၈ရက်နေ့လောက်ကလိုင်းမန်းကိုခေါ်ပြီးဖုန်းလိုင်းစစ်တော့ ကြိုးတွေအဆက်တွေများနေလို့ ကြိုးလဲရမ ယ်ဆိုတာနဲ့ ကြိုးလဲလိုက်တာ ၃သောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ကြိုးလဲလိုက်ပေမဲ့ လိုင်းကမကြည်ဘဲ Noise တွေဝင်နေပါတယ် ဒါနဲ့ ဘဲ noise ရှင်းဘို့နောက်ထပ် ၃သောင်းထပ်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ဒါလည်းလိုင်းကကောင်းသလိုဖြစ်ပေမဲ့ အင်တာနက်သုံးတာကတော့ အချိန်ကြာလာရင်တစ်ဖြည်းဖြည်း ကျပြီးလုံးဝသုံးလို့မရတော့ပါဘူး ။ကျွန်တော်တို့လို ADSL ကိုဖုန်းလိုင်းကအသုံးပြုတဲ့အင်တာနက်ဆိုင်တွေကဖုန်းမကောင်းရင်လုံးဝအဆင်မပြေပါဘူး။ဒါနဲ့လိုင်းမန်းကိုထပ်စစ်ခိုင်းလိုက်တာနဲ့
UG- Underground cable ဖြစ်တာဆိုတာနဲ့ လိုက်ချိန်းလိုက်တာ နောက်ထပ်၎သောင်းထပ်ကုန်သွားတာနဲ့
ပြီးခဲ့တဲ့လက တစ်လတည်းနဲ့ ၁သိန်းနီးပါပြောင်သွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လိုင်းကတော့ဖုန်းလိုင်းလည်းကြည်ပြီးအင်တာနက်လိုင်းလည်းတော်တော်ကောင်းသွားတယ်ပေါ့။မကြာပါဘူးတစ်လဘဲကြာတယ် ဒီလ၈ရက်နေ့ကွက်တိမှာဘဲ ဖုန်းထဲက ရေဒီယိုအသံတွေကြားနေရပါတယ်။ဒါနဲ့လိုင်းမန်းကိုထပ်ခေါ်ပြီးပြောတော့တော်တော်နဲ့ လာမလုပ်ပေးပါဘူး။နောက်တော့ ဖုန်းဆက်ပါများတော့ ကိုယ့်ဖုန်းတိုင်ကိုတောင်လာလုပ်ပေးစရာမလိုပါဘူး။
ဖျာပုံလမ်းထိပ်ဘုတ်ကနေ မျက်စိတစ်မှိတ်လုပ်ပေးလိုက်တာဖုန်းကချက်ခြင်းဘဲ ကောင်းသွားတယ်။ဒါနဲ့လိုင်းမန်းခေါင်းဆောင်ကို ခင်ဗျားတို့ ကျုပ်ဖုန်းကိုခဏခဏမလုပ်ပါနဲ့ ဖုန်းပျက်ရင်လည်းတစ်ခါလာလုပ်ရင် ၂ထောင်လောက်ပေးနေရတာ ကျုပ်တစ်ခါတည်း ၃သောင်းပေးထားမယ်ဆိုပြီး ၃သောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။သူ့ဆရာကိုပေးလိုက်ပေမဲ့ လှေခါးထမ်းတဲ့လိုင်းမန်းပုံကသိပ်မကြည်သလိုဘဲ ။မကြာပါဘူး နောက်နေ့သောကြာနေ့ ညနေ၆နာရီသူတို့ပြန်တဲ့အချိန်မှာလိုင်းကိုလုံးဝဖျက်တောက်သွားပါတယ် ဒါတော့ အရမ်းကိုလွန်သွားပါပြီ။
ရတယ်လေငါဒီကြိုးဖုန်းမသုံးလည်းဟမ်းဖုန်းသုံးမယ် အင်တာနက်မရလည်း မသုံးဘူးကွာအလုပ်လည်းမလုပ်ဘူးဆိုပြီး 106 ကိုအကျိုးအကြောင်းပြောပြီးတိုက်ရိုက်တိုင်လိုက်တော့မှဖုန်းကိုလာပြန်တပ်သွားပါတယ်။ဒီလိုမျိုး
သူတစ်ပါးအခက်အခဲတွေ့အောင်လုပ်ပြီးမှ ရတဲ့ပိုက်ဆံကြောင့်လားမသိ သူတို့ဘ၀တွေလည်းဘယ်တော့မှမပြောင်ရောင်ပါဘူး။ကဲသံသရာမကြောက်ရင်လည်းလုပ်ကြပေါ့ကွာ….
သံသရာဆိုတာလည်း သူတို့အတွက် တရေးတမော သွားအိပ်တဲ့ နေရာလို့ သဘောထားမှာ….
ကိုယ့်သားသမီးတွေ အတွက်သာဒီသောက်ကျင့်မျိုး ရှောင်ဖို့ ဥပမာပေးလို့ ရတာပေါ့ဗျာ..။
ပုံမှန် နိုင်ငံပြင်ပရောက်နေသူတွေ..သဘောင်္သားတွေ ပုံမှန် ၁၀ရာခိုင်နှုန်းအခွန်ဆောင်.. ရတဲ့ငွေပြည့်မှီရင်.. ကားသွင်းခွင့်ပါမစ်ချ..ကားသွင်းနိုင်ကတာကနေ…
(အမှတ်မမှားရင်) ဘိုချုပ်ထွန်းကြည်ကုန်သွယ်ရေးရောက်တော့.. ကားပါမစ်တွေကို.. စကိုင်တယ်ပေါ့..
(သာမန်အားဖြင့်) ပြည်ပရောက်သူတွေကို.. ကားပါမစ်ချမပေးတော့ဘူးလုပ်လိုက်တာပါ…။
လာရင်စိစစ်ချပေးတယ်လေ…။ (ဘယ်လိုစိစစ်သလဲတော့ မမေးနဲ့ )
အဲလိုနဲ့… ပါမစ်ဈေး.. ဒေါ်လာသိန်းဂဏန်းအထိရောက်ရောဆိုပါတော့….။
အဲဒီခေတ်က.. မဟနဘုန်းဘုန်းတွေများ.. ပါမစ်ဆရာတော်တွေဖြစ်တာပေါ့…။
တကာတွေများ.. ဘုန်းဘုန်းကြီးရယ်.. ပါမစ်တစောင်လောက်ပြောပေးပါ..။ ထမင်းဆီဆန်းရွှေလင်ဗန်းဆက်ပါမယ်လုပ်ရသပေါ့…။
ဘုန်းဘုန်းက. ဘိုချုပ်ကြီးတွေပြောပေး.. ဘိုချုပ်ကြီးတွေက.. ဆရာ/တကာရှယ်..
အခြေခံသဘောပြောရရင်.. လုပ်နည်းကရှင်းပါတယ်..။ ကလေးကွက်ပါ…။
နာမယ်မှာ..” ဖြိုး”ပါသူတွေ.. တလ ဒေါ်လာ၁၀၀ ပေးသွင်းစေဆိုပြီး.. “ဥပဒေကဲ့သို့အာဏာတည်သောအမိန့်”ကြီးထုတ်လိုက်ပါလား..။
မပေးဘူးလား..။ ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်နယ်နမိတ်ထဲ… နာမယ်မှာ..” အောင်”ပါသူတွေက..” ဖြိုး”ပါသူတွေဆီက.. ဒေါ်လာ၁၀၀ ရအောင်တောင်း…
မပေးရင်.. ” အောင်”ပါသူတွေက..” ဖြိုး”ပါသူတွေကိုသာ.. အချုပ်ထဲ ၁၀ရက်သွင်းနိုင်တဲ့အာဏာရစေ…
ပေးသွင်းခဲ့ရင်.. ၁၀ဒေါ်လာယူ… အစိုးရဖြစ်တဲ့… “ငါ့”ဆီ ဒေါ်လာ ၈၀သွင်းစေ…။
ပိုနေတဲ့ ၁၀ဒေါ်လာကို.. နာမယ် “ပု”ပါသူတွေကို.. မျှစေ..
စနစ်တွေလည်း ပြင်ရမယ် ထင်တယ်
ညီမျှတဲ့ နေ့ မှာ ဒီလို ပြဿနာတွေ နည်းသွားနိုင်တယ် ။
နှစ်တစ်ထောင် ကျိန်စာ များ မိနေသလား ပြန် စဉ်းစားရဦးမယ်
လိုင်းမင်းတိုင်းဒီလိုချည်းပဲ။ တခါတလေများကိုယ့်ဖုန်းကို သူတို့ဘုတ်ကနေဖြုတ်ပြီး ဖုန်းပြောနေလိုက်တာ။ ကိုယ့်မှာ အ၀င်လဲမရအထွက်လဲမရဖြစ်ကရောပဲ။
ဘာတွေများ ပြုပြင်ပြောင်းလဲနေသလဲဟင်….။ ဆရာ ချစ်စရာပြောသလို နောက်တော့မဆုတ်ပါဘူး ရှေ့တစ်လှမ်းမှမတိုးတာက ခက်တယ်….။
ရွာက အဖေနဲ့ အမေ ကတော့
ကျနော့်ကို အစိုးရ အလုပ် လုပ်စေချင်တယ်။ အာမခံချက် ရှိတယ်တဲ့။
ဒါပေမယ့် ကျနော် ကတော့ ပုဂ္ဂလိက ကိုပဲ ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။
ငယ်ငယ်တည်းက မြို့မှာ နေလာခဲ့ရတဲ့လူ၊ ပြီးတော့ ဒီလိုမျိုး အစိုးရနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေဟာ ဟောက်စား၊ လုပ်စားတွေလို့ နားလည်ထား၊ လက်တွေ့လည်း ကြုံခဲ့ရတာတွေများတော့ အစိုးရ အလုပ်ဆိုရင် (ခပ်ရိုင်းရိုင်း ပြောရရင်) ဘာကောင်ကြီးပဲဖြစ်နေနေ စောက်ထင်ကို မကြီးခဲ့ဘူး …။
ပုဒ်မ ၄ ကို မဆန့်ကျင်
လစာတိုး ပေး။တဖက်ကထိထိရောက်ရောက် ထိန်းကွပ်။
ကျုပ်လည်းအိမ်မှာ အရင်က ကြိုးဖုန်းနဲ့ အင်တာနက်သုံးတာပဲ
ရုံးမှာလည်း အဲ့အတိုင်းပါပဲရှင့်.. နည်းနည်းလေးများ အဆင်မပြေတာပြောလိုက်ရင် ခုချက်ချင်း ထထိုးမယ့် ရုပ်တွေနဲ့… ဘာတွေလုပ်ရမလဲလို့ မေးတာတောင် ကောင်းကောင်းမပြောချင်ဘူး..မေးလိုက်တိုင်းလည်း ချက်ချင်းလုပ်လို့မရဘူးဆိုတာကြီးပဲ..ခုတော့ အင်တာနက်ချိတ်ထားတဲ့ဖုန်းက လုံးဝ ဖုန်းပြောလို့မရဘူး..ခုထိ ဒီအတိုင်းပဲ..
ဟိုးးးအရင်တခါတုန်းကတော့ နေပြည်တော်ကို တိုင်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ နံပါတ်ကို မှတ်ထားပြီး ဖုံးပျက်ရင် လှမ်းတိုင်တာ ချက်ခြင်းကို လာပြင်တော့တာပဲ။
ခုတော့လည်း ဒုံရင်း ဒုံရင်းအတိုင်းပါပဲ။
တနင်္လာနေ့က ဖုံးပျက်လို့ ခေါ်တော့ အင်္ဂါနေ့ လာပြင်တယ်။
လာပြင်ရင် ၁၀၀၀ ပေးတာ နည်းလို့လား မသိဘူးလို့ မိတ်ဆွေတွေကို မေးကြည့်တော့ များများပေးလည်း မကြာမကြာပျက်တာပဲဆိုလို့………
ဒီအတိုင်းပဲ တစ်ခါခေါ် ၁၀၀၀ နဲ့ ပျက်တိုင်းခေါ်စနစ်ကို ဆက်လက်ကျင့်သုံးနေပါတယ်။